Maxaa hortaagan in Puntland & Jubbaland ay dhameystiraan Guddigii Doorashada ee lagu balamay? | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxaa hortaagan in Puntland & Jubbaland ay dhameystiraan Guddigii Doorashada ee lagu...
Maxaa hortaagan in Puntland & Jubbaland ay dhameystiraan Guddigii Doorashada ee lagu balamay?
Dowlad Goboleedyada Koofur Galbeed, Hir-Shabeelle & Galmudug ayaa soo dhameystiray Guddiyada xalinta Khilaafaadka & Doorashada 20/21 ee ka dhashay heshiis siyaasadeedka DFS & DG dhexmaray Bilihii September iyo October 2020.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in maamulada Puntland & Jubbaland ay ka war-dhowrayaan halka ay ku biyo shubato doodda ka taagan guddiga la magacaabay oo xubnaha mucaaradka ah ay sheegeen in laga soo dhex xulay Hay’adda Nabadsuidda & Madaxtooyada.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in DG Puntland & Jubbaland Laga sugayo soo gudbinta xubnahaas, balse ma uusan shaacin sababta keentay in muddo intaas la eg laga sugo.
Waqti cayiman oo ugu dambeyn laga sugayo Puntland & Jubbaland soo gudbinta xubnaha Guddiga ma muuqda mana la shaacin, waxa ay taasi keentay shaki kale oo la xiriira aamusnaanta iyo soo gudbin la’aanta guddiga laga doonayo.
Dadka falaanqeeya arimaha gobolka ayaa sheegay in Madaxda Puntland & Jubbaland aysan la dhacsaneen tuhunka soo baxay ee hareeray guddiyada kale ee la magacaabay, maadaama Xisbiyada mucaaradku ay sheegeen in laga gudbay xeen-daabka madax bannaanida magacaabista Guddiga oo Hay’adda Sirdoonka xubno katirsan lagu daray qaybta doorashada, halka Xukuumadda Gaashaanka ay ku dhufatay warkaas.